मन्त्री ज्यू ? कण्डम निःशुल्क हुँदा प्याड किन भएन निःशुल्क, स्वास्थ्य मन्त्री ज्यू ? - नागरिक रैबार::Nagarikraibar.com मन्त्री ज्यू ? कण्डम निःशुल्क हुँदा प्याड किन भएन निःशुल्क, स्वास्थ्य मन्त्री ज्यू ? - नागरिक रैबार
सिर्जना बस्नेत–आज बिहानदेखि तल्लो पेट दुखिरहेको छ । चिसो महिना लागेदेखि नै महिनावारी हुनु एक हप्ता अगाडिदेखि ढाड दुख्ने व्यथा बोनसमा पाएको छु । सँधै जस्तै यो महिना पनि कहिले महिनावारी हुने हो केही पत्तो छैन । महिनै पिच्छे तालिका बदलिन्छ । कहिले महिनाको सुरुमै त कहिले महिनाको अन्त्यमा। निश्चित समयमै महिनावारी नहुने यो समस्याले गर्दा पुर्व योजना अनुसार केही तयारी गर्न पाउँदिन ।
कञ्चनपुरमा बलात्कारको मुद्धा ९ लाखमा मिलाउन खोज्ने इन्सपेक्टर साउँदमाथि छानविन सुरु
डोटी प्रहरीको हिरासतमा चालकको मृत्यु प्रकरणः दुई प्रहरी जवान विरुद्ध मुद्धा